Chiziviso chitsva kubva kuApple chine chekuita neECG yeApple Watch | Ndinobva mac
Uye ndezvekuti isu tichiri kuramba takamirira kusvika kweECG basa kuti isvike kune dzimwe nyika umo zvitupa zvinoita senge chete chipingaidzo kuti zvisvike zviri pamutemo, muApple ivo vanoramba vachiratidza imwe yeaya electrocardiograms inogona kutorwa neApple Watch Series 4.
Iri ibasa rakasarudzika rewachi iyi uye nekudaro mamwe mamodheru akasarudzika. Kune rimwe divi, iro basa rinogona kumisikidzwa kure kubva kuApple chairo sezvo Hardware inodiwa kuti ishande inowanikwa mune ese akateedzana 4 mamodheru, inofanirwa mirira mirau uye kubvumidzwa kwenyika imwe neimwe, saka zvinonetsa kuti isvike kune vese vashandisi.
Chokwadi isu tese tatoziva kutora iyi chiyero asi Apple iri kumutsiridza aya madiki ekudzidzisa pane yayo YouTube chiteshi. mabvazuva ndicho chiziviso chitsva mairi Apple inotsanangura zvakare nemifananidzo maitiro ekuita kuti iyi ECG ishande chero nguva kana nzvimbo:
Chaizvoizvo, tese kana vangangoita tese isu tinoziva maitiro ekuita imwe yeaya maECG pane yedu Apple Watch dambudziko nderekuti mirau yenyika yega yega haibvumidze kuwedzera basa iri muzvishandiso zvepasirese. Zuva rinosvika iri tese tichakwanisa kutora chiyero ichi mune chero mamiriro ezvinhu, asi zviri pachena kuti harizombove rakafanana nekuita chaizvo electrocardiogram nachiremba wedu, saka ndicho chinhu chinogona kubatsira kwatiri asi isu hatifanirwe kuvimba zvizere isu pachedu kana izvi uye kurega kuenda kuna chiremba wedu kuti aite bvunzo idzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chitsva Apple Chiziviso Chinoenderana neApple Tarisa ECG
Guillermo Del Rio Zurita akadaro
Zvinonyadzisa kuti isu tichiri kusakwanisa kuishandisa muSPAIN.
Pindura Guillermo Del Río Zurita
Guillermo Del Río Zurita chitsotsi chedu tese vanozvitenga kunyanya kune iro basa ...
Isa yako offroad hunyanzvi kuyedza neRock Crawler
Siri CEO anosiya Apple